Fanafiana karana :: Vehivavy roa sy lehilahy iray voarohirohy ho mpaka an-keriny • AoRaha
Fanafiana karana Vehivavy roa sy lehilahy iray voarohirohy ho mpaka an-keriny
Niafara tamin’ny fisamborana vehivavy roa ny fitadiavan’ ny pôlisy lehilahy iray teny Andraisoro, afak’omaly, noho ny raharaha fakana an-keriny Karàna. Vady sy anabavin’ilay lehilahy karohina ireto roa vavy voasambotra. Lehilahy iray hafa ihany koa, izay voalaza fa mpitandro filaminana efa voaroaka tamin’ny asany, no voasambotra teny Anosy noho io raharaha io ihany.
Heverina ho anisan’ireo mpiray tsikombakomba sy nandray anjara tamin’ny fakàna an-keriny Karàna niseho teto an-drenivohitra, tamin’ny volana jolay sy novambra 2018, ireto olona telo nosamborin’ny pôlisy, afak’omaly, ireto.
«Noentina natao famotorana izy roa vavy mpiaotra hita tao an-trano. Taorian’ny fakàna am-bavany azy ireo no nahafantarana ny lehilahy iray, mpitandro filaminana teo aloha, voalaza fa nomena vola vahiny 50 euros miisa telo amby efapolo. Niova ho mpamilina mpisolovava iray io lehilahy io no izao tra-tehaka izao», hoy ny mpanao famotorana.
Olona folo ao anaty fikambanan-jiolahy iray no efa naiditra am-ponja eny Antanimora sy Tsiafahy tamin’ireo raharaha roa fakàna an-keriny karana niseho tamin’ny taon-dasa ireo. Voatondro ho naman’izy ireo ireto tratra farany, afak’omaly ireto.
«Niaiky izy roa vavy fa nandray anjara tamin’ireo fakàna an-keriny ireo tokoa ilay lehilahy tadiavin’ny pôlisy. Volabe no efa azon’izy ireo tamin’ny asa ratsy ka nisy ny efa nividianana fiara sy nananganana trano ary nanaovana fialan-tsaratra », hoy ihany ny mpanao famotorana.
Fiampitana nitera-doza Zazalahy mpianatra naratra voadonan’ ny kamiao
Voina tany anaty ala Lehilahy iray namoy ny ainy main’ny herinaratra
Fakana an-keriny :: Nalefa any Tsaratanàna ireo “Commandô”-n’ny Gsis
Zaza hita faty